ရေစိုခံရိန်းဖုံး နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ ရေစိုခံရိန်းဖုံး ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
ရေစိုခံရိန်းဖုံး Výrobce, dodavatel, vývozce s Factory v Taiwan - ရေစိုခံရိန်းဖုံး, ရေစိုခံရိန်းဖုံး výrobce, ရေစိုခံရိန်းဖုံး dodavatel, ရေစိုခံရိန်းဖုံး vývozci, ရေစိုခံရိန်းဖုံး vývozce, Taiwan ရေစိုခံရိန်းဖုံး, ရေစိုခံရိန်းဖုံး továrna, ရေစိုခံရိန်းဖုံး výrobci, ရေစိုခံရိန်းဖုံး Dodavatelé, ရေစိုခံရိန်းဖုံး výrobce, ရေစိုခံရိန်းဖုံး OEM, ရေစိုခံရိန်းဖုံး továrny, ရေစိုခံရိန်းဖုံး výrobci
ရေစိုခံရိန်းဖုံး výrobce, dodavatel, vývozce, továrna Taiwan
hood ကို drawstring သူတို့ရဲ့အလိုတော်အပေါ်အရွယ်အစားကိုထိန်းညှိဖို့အသုံးပြုသူများကိုကမ်းလှမ်း
elastic cuffs ထိထိရောက်ရောက်အတွက်ရေကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့စနစ်တကျအသုံးပြုသူများကလက်ကောက်ဝတ် fit နိုင်ပါတယ်
ချစ်စရာ SNOOPY ကာတွန်းပုံစံကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြီးများနှင့်ကလေးများနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးရေပန်းစားသည်
မထိုက်မတန်တစ်ဦးကအရွယ်အစားအားလုံး.ဒါဟာ'အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်လူငယ်များနှစ်ခုလုံးအတွက်သင့်လျော်သော s ကို,အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး
တစ်ခုချင်းစီကို poncho ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အိတ်၌တစ်ဦးချင်းစီထုပ်ပိုးနေသည်,အလွယ်တကူသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားခေါက်,ကိုယ့်အိတ်ကပ်ထား,ခရီးသည်ပခုံးပိုးအိတ်,နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ကားတစ်စီး.
breathable နှင့်ထူ PE ပစ္စည်းနှင့်ဖွဲ့,100 အ%ရေစိုခံ.
နိုင်ငံတကာအမိန့်:30 ရက်%အပျငှေ,ဝယ်လက် L ကိုထုတ်ပေးသင့်တယ်/မကြာမီပံ့ပိုးပေးကမ်းလှမ်းမှု B ကိုကဲ့သို့, C/L ကို.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.rain-clothing.com/my/waterproof-rain-cover.html
အကောင်းဆုံး ရေစိုခံရိန်းဖုံး ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် ရေစိုခံရိန်းဖုံး မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ